Tag: isticmaalaha curiyay | Martech Zone
Tag: isticmaalaha curiyay
Cabsi… $ 8.8 Bilyan Ayaa Lagu Bixin Doonaa Halloween Sannadkan
Isniin, Oktoobar 28, 2019 Isniin, Oktoobar 28, 2019 Douglas Karr
Way cadahay in loogu talagalay noocyada iyo suuqleyda bartilmaameedsanaya dhaqanka Halloweeners, iyagoo ka faa'iideysanaya Pinterest iyo Facebook si ay u gaaraan in tirakoobyada duugga ahi ay dani kuugu jirto. Marka la barbardhigo, Instagram, Snapchat, iyo TikTok ayaa ah astaamaha ugu fiican ee loogu talagalay noocyada "khibrad" - gaar ahaan haddii aad bixinaysid soo jiidasho soo jiidasho leh sannadkan - iyo dukaamada tafaariiqda si ay u gaaraan dhallinta yar ee xafladda Halloween. Shelf, Halloween by lambarrada tirakoobka Halloween kor iyo hoos Nacnaca weli waa
Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Ku Maalgashato Fiidiyowyada Wax Soo Saarka Boggaaga Ecommerce
Khamiista, Oktoobar 18, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Fiidiyowyada waxsoosaarka waxay bixiyaan dukaamada elektaroonigga ah qaab hal abuur leh oo ay ku muujinayaan wax soo saarkooda iyagoo sidoo kale u oggolaanaya macaamiisha fursad ay ku arkaan alaabada ficil ahaan. Marka la gaaro 2021, waxaa lagu qiyaasay in 82% dhammaan taraafikada internetka ay ka koobnaan doonaan isticmaalka fiidiyowga. Hal dariiqo oo ganacsiga eCommerce ay uga hor mari karaan tan waa iyada oo la abuuro fiidiyowyo wax soo saar ah. Istaatistikada Dhiirrigelisa Fiidiyowyada Wax Soo Saarka ee Goobtaada Ganacsi: 88% ee milkiilayaasha meheradaha waxay sheegeen in fiidiyowyada wax soo saarka ay kordhiyeen qiimaha beddelaadda fiidiyowyada
Vydia waa shirkad Inc 500 oo tiknoolajiyad fiidiyow ah oo awood u siinaysa abuurayaasha inay si fudud u maareeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo xuquuqdooda dhijitaalka ah iyagoo adeegsanaya hal barxad dhexe. Abuureyaasha maaddooyinka ayaa ka faa'iideysanaya awoodda fiidiyowga dhammaan barnaamij kasta oo bulsho oo la heli karo, si kastaba ha noqotee, aragtiyadooda iyo xakamaynta hantidooda aqooneed ayaa xadidan. Vydia waxay awood siineysaa abuureyaasha iyadoo lagu xallinayo dhibaatadan iyadoo la adeegsanayo caqli, codsi guud. Roy LaManna, Aasaasaha iyo Maamulaha Hay'ada Vydia Vydia Waxyaabaha ay ka mid yihiin awooda lagu:
Suuqgeynta Jiilka: Fahamka Kooxaha Kala Duwan ee Kala Duwan iyo Waxa ay doorbidaan
Talaado, Disembar 26, 2017 Talaado, Disembar 26, 2017 Donna Moores
Suuqleyda ayaa had iyo jeer raadiya habab cusub iyo istiraatiijiyado ay ku gaaraan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah isla markaana ka helaan natiijooyinka ugu fiican ololayaasha suuqgeynta. Suuqgeynta jiilka waa mid ka mid ah istiraatiijiyaddan oo siinaysa suuqleyda fursad ay si qoto dheer ugu dhex galaan dhagaystayaasha la bartilmaameedsaday oo ay si fiican u fahmaan baahiyaha dijitaalka ah iyo doorbidka suuqooda. Waa maxay Suuq-geynta Jiilka? Suuq-geynta jiilka waa habka loo kala qaybiyo dhagaystayaasha qaybo ku saleysan da'dooda. Adduunyada suuqgeynta, ayaa